Date My Pet » Ny fomba hihazonana ny fifandraisana izay manatanteraka faminaniana
amin'ny Mihaela Schwartz
Ny fomba hihazonana ny fifandraisana izay manatanteraka faminaniana
Last nohavaozina: Sep. 18 2020 | 3 min namaky
Maro ireo mahafantatra izany mpivady efa: fifandraisana izay manatanteraka faminaniana dia mitaky be dia be ny fotoana sy ny hery fampiasam-bola. Raha nianatra ny sasany izany ny voa, ny hafa takatsika tany am-boalohany fa tsy misy afaka manana fifandraisana izay manatanteraka faminaniana nefa tsy soa aman-tsara amin'ny tena voalohany indrindra. Raha mijery ny fifandraisanareo ary mahatsapa fa tsy faly tanteraka amin'ny fomba izany koa ankehitriny, Tokony ho fantatrao fa tsara hanombohana amin'ny fanatsarana dia ny tenanao. Tena fivoarana sy ny fampandrosoana manokana dia tsy ny fanalahidy ianao ho sambatra, fa ny mahafinaritra ihany koa ary po ny fiainana ho toy ny mpivady. Tsy afaka manova ny tenanao, na ny fifandraisana amin'ny segondra, fa eto misy hevitra mba handinika:
1. Mahasambatra ao anatiny
Fa lazaina, Tokony ho fantatrao fa namanao ny hany tanjona eo amin'ny fiainana dia tsy mba ho sambatra ianao raha mipetraka sy manao na inona na inona momba izany. Miandry fotsiny ny fahasambarana mba handondona ny varavarana dia fa adala. Fifandraisana izay manatanteraka faminaniana tafiditra amin'ny olona roa izay manaja sy miahy ny hafa. Mpiara-miasa tsirairay maka zavatra avy amin'ny fifandraisana, fa koa mitondra zavatra ho any izany. Raha afaka ny ho jamba ny fitiavana sy ny tsy misy fepetra, tsy voatery ho tia tena. Ary noho izany, Tsy manantena ny hafa mba ho sambatra ianao. Vola amin'ny tenanao; mianatra ny fomba hahatongavana ho sambatra mba mandray anjara ny mpivady sambatra.
2. Esory ny andry eo amin'ny masonao
Teny efa ela dia mampianatra antsika ny hazo fisaka aloha hiala ny masonao, raha te-ho hita mazava tsara, ary rehefa afaka izany ihany no hanala ny speck avy amin'ny olon-kafa mason'ny. Inona no dikan'ity? Jereo voalohany amin'ny tenanao ao amin'ny fitaratra, hahita sy miezaka hiasa amin'ny lesoka alohan'ny manondro ny mpiara-miasa avy ny misshapes. Raha tsy lavo eo amin'ny hafa tafahoatra sy mandeha ny fanamelohana tena, hanapaka ny mpiara-miasa sasany miraviravy, mitsahatra mijery ny / azy isaky ny hetsika amin'ny alalan'ny fanandratana fitaratra, ary miezaka ny hahatakatra ny zavatra nataony fa tsy ny hitsara azy ireo. Manaraka anananao na dia ny mpivady kely ady, raha tokony miezaka ny hametraka ny tsiny eo amin'ny olon-kafa, manontany tena izay nanao ratsy. Miezaha mitady ny fomba fialana amin'ny ady, ary, raha toy izany ny tsy fifanarahana mipetraka, Eritrereto ny vahaolana hamahana izany am-pilaminana.
3. Ataovy ny tony tsara ny andro
Maro dia maro ny fifandraisana maka fahadiovam noho ny roa ihany no mpiara-miasa hanana ny toe-tsaina mpiady. Fifandraisana izay manatanteraka faminaniana Tsy ady. Tsy mila hanafika ny amin'izy ireo, na ny manisa ny fandresena toy ny isa ambony dia tsy hanampy anao hahatsapa sambatra kokoa. Fa tsy, miezaka ny hitandrina ny tony sy ny hanam-paharetana amin'ny mpiara-miasa. Eritrereto ilay namanao, dia tsy ny fahavalonao, ary na oviana na oviana te-hanangana ny feonao, maka bahana tsara ary aza ny tenanao. Miandry ianao afaka miresaka izany amin'ny alalan'ny moramora, ary ianao tsy ho ela hahita ny vokatra.
4. Lay salama fototry ny fifandraisana
Toy ny trano mafy dia miorina amin'ny fototra mafy, fifandraisana izay manatanteraka faminaniana dia miorina amin'ny olona salama. Izany dia midika hoe tsy maintsy ho marin-toetra amin'ny mpiara-miasa sy ny, ny zava-dehibe indrindra, ny tenanao hatrany am-boalohany. Nahoana ianao no niezaka mafy mba hanafina ny lesoka Raha toa ianao mihevitra ny ho avy miaraka? Amin'ny farany ny hafa Mariho ny malemy kokoa hevitra. Efa nieritreritra fa mety marina ny namanao tia ilany anareo izay mandinika Diso?
5. Aza kivy ny nofy
Iza no nilaza taminao fa mba hanana fifandraisana izay manatanteraka faminaniana, ary ho faly ianao dia voatery mamoy ny nofy? Raha mihevitra ny mpiara-miasa izany no ny faniriany, misy safidy roa: na nahazo azy ianao / ny ratsy, na izany aza ny ONE. Tsy fitiavan-tena, na fitiavana ny hafa mandrafitra ny toe-tsaina mety ho fifandraisana mirindra. Mifanohitra amin'izay aza, ny fiaraha-miasa ara-pahasalamana fitiavana dia midika fa ny roa fanohanana sy mifamporisika mba hanohy ny nofinofiny. Raha manapa-kevitra fa ny faniriana sy ny tanjona manokana dia tsy manan-danja, Tsy ho ela dia kivy sy tanteraka. Izao izay tianao ny fifandraisanareo ho sasin-tenin'ny?
Niaraka ny tanora vehivavy nisara-panambadiana Made Easy
Afaka mahomby Vehivavy Tena Manana izany rehetra?
Ahoana no mba hanamaivanana ny fanaintainana ny hoavy?
7 Daty rehetra From New York City Mitohy
3 Soso-kevitra ho an'ny An Amazing fifandraisana